Nepal Samaya | खोपमा सफल भएको सरकारको दाबी, सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगे गभर्नर [२०७९-१-४]
खोपमा सफल भएको सरकारको दाबी, सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगे गभर्नर [२०७९-१-४]
काठमाडौं- आइतबारका प्रमुख घटनाक्रमसहितको नेपाल समय समाचारका मुख्य शीर्षकहरू-
-चैतभरमा सबैलाई कोरोना खोप पुर्‍याउने लक्ष्यमा सरकार सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी, लक्षित नागरिकलाई अझै पनि खोप दिइरहेको जानकारी। खोपमा सफलता
-रहस्यमय मृत्यु भएकी अमृता टन्डन खत्री प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीबाट हुनुपर्ने माइतीको माग, प्रहरीले घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको आरोप। माइतीको माग
-आफूमाथिको कारबाही फिर्ता लिन माग गर्दै निलम्बित गभर्नर अधिकारी पुगे सर्वोच्च, छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै खारेजीको मागदाबीसहित रिट दायर। सरकारविरुद्ध गभर्नर
-युक्रेनी सहर मारियापोलमाथि आफूहरुको पूर्ण नियन्त्रण रहेको रुसको दाबी, युक्रेनी सेना हटाए सबै प्रकारका वार्ता अन्त्य गर्ने युक्रेनी राष्ट्रपतिको चेतावनी। युक्रेनको चेतावनी
-र, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को बोर्ड बैठक चाँडै बस्ने सदस्य सचिव घिसिङको दाबी, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमै गण्डकीमा हुने जानकारी। राखेप बोर्डको तयारी
सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा सफलता हात पारेको दाबी गरेको छ।
२०७८ चैत मसान्तसम्म १८ वर्षमाथिको सबै जनसंख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने लक्ष्य लगभग पूर्ण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताएका हुन्। असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि चैतभरमा १८ वर्ष माथिका सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क लगाइसक्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारको उक्त घोषणाअनुसार ९५ प्रतिशत लक्षित व्यक्तिले खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेको अधिकारीले बताएका हुन्।
सह प्रवक्ता अधिकारीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा कोरोनाविरुद्धको खोप खेर फालेको भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले हालसम्म सरकारले कोरोनाविरुद्धका खोपहरु खेर नफालेको दाबी गरे।
सहप्रवक्ता अधिकारीले अझै पनि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान जारी रहेको बताए। सरकारले टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान पनि सुरु गरेकाले सोही कार्यक्रममा कोरोना खोप पनि दिलाइने बताए।
अनुसन्धान गर्न सीआईबीको माग
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रहस्यमय मृत्यु भएकी अमृता टण्डन खत्रीका माइती पक्षले घटनाको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)बाट गराउन माग गरेका छन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी ठगबहादुर केसीको भूमिकाले आफूहरु सशंकित भएको भन्दै उनीहरुले प्रहरीमाथि पनि छानबिनको माग गर्दै सीआईबीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
आइतबार मृतक अमृताका माइती पक्षले तिलोत्तमा-२ जानकीनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विष सेवन नभई हत्या भएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान फितलो नबनाउन आग्रह गरेका छन्।
मृतक अृमताका दाजु पुष्पक खत्रीले शुरुदेखि नै बुटवल प्रहरीले घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको बताउँदै शुक्रबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेकोमा निन्दा गर्दै डीएसपीमाथि पनि छानबिनको माग गरे।
उनले आफूहरु अन्यायमा परेको बताउँदै प्रहरीबाट निष्पक्ष अनुसन्धानको चाहना आफूहरुले राखेको बताए। शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको छलफलमा थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट टोली ल्याउने सहमति भएको पुष्पकले बताए।
शवको पोष्टमार्टम फरेन्सिक ल्याब विशेषज्ञको रोहवरमा पीडितले चाहेको अस्पतालमा गराउन समेत प्रशासनले सहमति जनाएको छ। पीडित पक्षले दवावमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। तिलोत्तमा २ जानकीनगरकी २९ वर्षीया अमृता टण्डनको चैत ३० गते राती रहस्यमय रुपमा मृत्यु भएको थियो। विष सेवन गरेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भनिए पनि घटना शंकास्पद देखिएपछि पीडितले हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। वैशाख १ गते प्रहरीले अमृताका श्रीमान् प्रेम टण्डन, ससुरा टहलसिंह र सासू दीपा टण्डनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अमृताको न्यायका लागि भन्दै बुटवल र तिलोत्तमा क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको छ। (घटना र त्यसपछिका अपडेट नेपाल समय डटकममा पढ्न/हेर्न र सुन्न सकिनेछ।)
नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
आफूमाथि गरिएको निलम्बनको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन्। चैत २५ गते सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो। राष्ट्र बैंकबाट सूचना चुहाएको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ। गभर्नर अधिकारीले भने छानबिन समितिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै त्यसको खारेजीको माग गरेका छन्।
यसअघि अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट आएको रकम फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो। उक्त समाचार प्रकाशन भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै शर्माले अधिकारीमाथि आक्रोश पोखेका थिए।
उता राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरिएको कारबाहीको विरोधस्वरुप बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार परिसरमा कालो ब्यानर झुन्ड्याएर कोणसभा गरेको छ।
प्रचण्ड र उपेन्द्रबीच भेट
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतवार भेटवार्ता गरेका हुन्। आइतवार सिंहदरवारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा तिन नेताबीच छलफल भएको हो। भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष यादवले सामान्य गफगाफ मात्रै भएको बताए।
आसन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको भएपनि कतिपय स्थानीय तहहरुमा सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन बन्न सकेको छैन। गठबन्धनको सम्बन्धमा विभिन्न अड्कलवाजीहरु भइरहेका बेला गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा आबद्ध अर्को दल नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को अनुपस्थितिमा दुई दलबीच छलफल भएको हो।
भ्रष्टाचारले देश सिध्याइदिन्छ : सभामुख
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले मुलुकलाई नै सिध्याइदिने चेतावनी दिएका छन्।
आईतबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्टुन प्रर्दशनी’को उद्घाटन गर्दै उनले भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उल्लेख गरे । भ्रष्टाचारविरुद्ध निशाना नसोझ्याउने हो भने मुलुकलाई नै सिध्याईदिने उनको चेतावनी छ।
सभामुख सापकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्षेप्याष्त्र हुनेगरी कार्टुनहरु बनाउन पनि काटुर्निष्टहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए। काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा सुरु भएको सो प्रर्दशनी तीन दिनसम्म चल्नेछ।
एमालेले जितेका स्थानमा माधव नेपालको दाबी
सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले जितेको स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवार पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालले भने एमालेले २०७४ सालमा जितेको स्थानमा आफ्नो पार्टीको हक लाग्ने बताएका हुन्।
पार्टीको सम्पर्क विशेष प्रदेश कमिटीले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा यत्तिकै टिकटको दावी नगर्ने तर जित्ने ठाउँमा दाबी नछोड्ने बताएका हुन्।
अध्यक्ष नेपालले चुनावी तालमेल गर्दा कार्यकर्ताहरुको कुरा सुनेर गर्न नहुने पनि गठबन्धनमा आवद्ध दललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग वैशाख ८ देखि सञ्चालनमा
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावनमार्ग वैशाख ८ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि धावनमार्ग सञ्चालन मिति तोकिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो।
पुरानो एक हजार ५०० मिटर लामो धावनमार्ग बन्द गरेर अब ३ हजार मिटर लामो नयाँ धावनमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीवकुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बुद्ध, यति, श्री, गुण र सौर्य गरी ५ एयरलाइन्सले विमानस्थलमा आन्तरिक उडान गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ २ गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
एक दिनको कमाइले हप्ता दिन धानिने भएपछि पशु हाटबजारमा व्यापारीहरुको आकर्षण बढ्न थालेको छ।
बाँकेको जानकी गाँउपालिका–३ रमवापुरका व्यापारीहरु गाउँको व्यापारको कमाइले घरखर्च चलाउन सहज भएको बताउँछन्। अन्य काम गर्दा हरेक दिन त्यत्तिकै मिहेनतका साथ काम गर्नुपर्ने र भनेको जस्तो कमाइ नहुने तर पशु व्यापार गर्दा मनग्य फाइदा भइरहेकोले पशु किनबेच गर्नेहरुको आकर्षण बढ्दै गएको हो।
पशु हाट बजार समितिका सदस्य रहमान अलीले पशु मेला लाग्नाले स्थानीयले कमाइ गर्ने अवसर पाएको बताए । उनले पशु हाट बजारबाट स्थानीयहरु सन्तुष्ट रहेको र बजारमा बिक्री गरेबापत प्रतिगोटा २०० रुपैयाँका दरले समितिलाई रकम बुझाउनु पर्ने नियम लगाइएको जानकारी दिए।
२० वर्षदेखि पशु व्यापार गर्दै आएका विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले पशु बजारमा कारोबार बढेको बताए।
स्थानीयहरुले पशु हाट बजारलाई अम्दानीको स्रोतको माध्यम बनाएका छन्। तर पछिल्लो समय बजारमा पशुको कमी हुन थालेको स्थानीयहरुको गुनासो छ।
मारियापोललाई नियन्त्रणमा लिएको रुसको दाबी
पूर्वी युक्रेनको मारियापोल शहरको सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र युक्रेनी सशस्त्र बल र लडाकुहरूबाट पूर्ण रूपमा खाली गरिएको रुसी सेनाले दाबी गरेको छ।
प्रतिरोधी सेनाका अवशेषहरू एजोभस्टल आइरन र स्टिल वर्क्स प्लान्टहरूमा अवरुद्ध गरिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोभले शनिबार ब्रीफिंगका क्रममा बताएका हुन्।
प्रवक्ता इगोरले यो अवधिमा १ हजार ४ सय ६४ युक्रेनी सैनिकले आत्मसमर्पण गरेको समेत बताएका छन् ।
आजोभ सागरको एक प्रमुख बन्दरगाह शहरको रूपमा मारिउपोल रूस-युक्रेन द्वन्द्को सबैभन्दा खराब हिंसाको साक्षी बनेको छ।
यता युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयले भने मारियापोलमा रुसीहरूसँग लडिरहेको दाबी गरेको छ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मारियापोलमा रहेका युक्रेनी सेना हटाए रुससँग सबै प्रकारको वार्ता अन्त्य गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
राखेप बोर्ड बैठक चाँडै
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले राखेपको बोर्ड बैठक चाँडै बस्ने बताएका छन्।
घिसिङले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद समन्वय समितिको पहिलो बैठकमा यस्तो बताएका हुन्। २०७५ यता बोर्डको बैठक बसेको छैन। सदस्यसचिव घिसिङकै अध्यक्षतमा सातै प्रदेशका सदस्यसचिव, तीन विभागीय टोलीका प्रतिनिधि, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
त्यस्तै, उनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमा हुने पनि बताएका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा जेठ २२ देखि २८ गतेसम्म आयोजना हुने निर्णय भएको छ।
बैठकमा मधेसबाहेक ६ प्रदेशका सदस्यसचिव, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र विभागीय क्लबका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। मधेश प्रदेशमा भने सदस्यसचिव नियुक्त भइ नसकेकाले महिला, बालबालिका तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख ठूलोबाबु दाहाल बैठकमा उपस्थित थिए।
प्रकाशित: April 17, 2022 | 21:27:36 काठमाडौं, आइतबार, वैशाख ४, २०७९